Referrer Spam avy amin'ny Darodar.com. Ahoana ny fomba handresena io olana io? & Ndash; Valio amin'ny Semalt
Referrer Spam avy amin'ny Darodar.com. Ahoana ny fomba handresena io olana io? - Valio amin'ny Semalt
Mahita referrals amin'ny darodar.com ao amin'ny Google Analytics ianao? Maro ireo mpitoraka blaogy sy webmasters no miatrika ity olana ity na dia tsy mifandray amin'ny tranonkala aza ny spam-referendum darodar.com. Darodar.com dia tranonkala iray izay maneho ny lisitry ny lisitry ny kaonty Google Analytics anao ary tsy mitsidika ny tranokalanao. Ho solon'izany, hahita ny fitsidihana mahazatra anao ianao miaraka amin'ny taham-panafana 100% sy ny fotoana laninao amin'ny pejy Internet anao. Darodar.com dia iray amin'ireo tranonkala miresaka ny mpampiasa amin'ny spam referrer. Mampiasa teknika isan-karazany izy mba handefasana fifamoivoizana be eny amin'ny tranokalanao, na dia avo kokoa noho ny salan'isa aza ny taham-pidirana.
Ny vohikala sasany dia mamoaka ny lisitr'ireo mpitsidika tsara indrindra, ary mampiasa ny lisitr'izy ireo mba hampidirana ny rohy ireo hackers, manantena fa hitsidika ny tranokalany ny olona sasany ary hividy ny vokatra. Ireo tranonkala spamming dia mpividy ny orinasa mainty hoditra SEO, izay mampihatra ny fampitomboana ny fifamoivoizana na dia efa nampiasa ny tetikady mainty SEO aza izy ireo. Oliver King, Semalt Customer Success Manager, mampahatsiahy anao fa raha mampanantena ny orinasan-tserasera SEO hampandroso ny fifamoivoizana ianao ao anatin'ny andro maromaro, dia mety ho tafiditra amin'ny programan'ny fifamoivoizana.
Ahoana ny fiantraikan'ny spam mpampiasa anao?
Azo antoka ny filazana fa ny spam referrer dia misy fiantraikany amin'ny data Google Analytics amin'ny fomba maro. Ny iray amin'ireo antony lehibe amin'ny fampiasana ny Google Analytics dia ny fijerena ny tranonkala izay mandefa ny fifamoivoizanao marina ary inona no tafiditra amin'ny fandaharam-pampianaran'ny trafika sandoka. Ny rohy marina avy amin'ny vohikala hafa dia manampy anao hivoatra
Ahoana no hanafoanana izany?
Ny vaovao tsara dia ny ahafahanao misoroka ny adihevitra momba ny fitsaboana amin'ny fanelingelenana ny data Google Analytics. Ny fomba tsara indrindra dia ny mametraka filisty vitsivitsy ary manakana ireo tranonkala amin'ny fandefasana mpitsidika hosoka.
Hanangana ireo sivana amin'ny darodar.com ianao dia tokony hanaraka ireto dingana ireto:
Midira ao amin'ny kaontinao Google Analytics ary mandehana any amin'ny sehatry ny Admin.
Hifidy ny kaonty sy ny fananana tianao halefa any amin'ny fanariam-pako.
Tsara ny mamorona filtre amin'ny fomba fijery voalanjalanja, noho izany dia tsy maintsy misafidy ny safidin'ny Create New View ianao avy amin'ny fizarana "Drop-down View."
Eo ambanin'ilay sehatra View dia tokony kitihina amin'ny Filtres ianao ary mamorona Filtre vaovao.
Aza adino ny manolotra anarana amin'ny sivana vaovao tahaka ny darodar.com.
Fidio ny karazan-tsindrim-pandraharahana ary tsindrio ny safidy Exclude. Avy eo dia tokony hifidy ny safidy Referral ao amin'ny sahan-drakitra fonosana ianao.
Eto anatin'ity darodar \_ .com ity ianao ary hanavotra ny fanovana.
Misy fomba mora kokoa ve?
Ny miteny amim-pahamarinana, io no fomba tsotra sy mahomby indrindra hanakanana ny spam referral darodar.com. Azonao atao ihany koa ny manandrana ny Blockel, tolotra iray izay mitazona spam manitsy avy amin'ny data Google Analytics automatique Source .